Garoon kubada cagta oo caan ah oo dumay dhimasho & dhaawac ka…(Video+Sawiro) – SBC
Garoon kubada cagta oo caan ah oo dumay dhimasho & dhaawac ka…(Video+Sawiro)
Garoonka caanka ah ee Grolsch Veste stadium ee ku yaal magaalada Enschede ee kooxda FC Twenet ayaa galabta soo dumay xili ay shaqo dayactir ah ka socotey garoonkaasi.
Mayor-ka magaalada Enschede Peter den Oudsten ayaa saxaafada u xaqiijiyey in hal qof uu ku dhintey mashaqadan isla markaana 16 qof oo kale ay ku dhaawacmeen, waxanaa gabi ahaanba soo dumay saqafka sare ee garoonka oo isku dhex daatey.
Grolsch Veste stadium ayaa kooxda FC Twenent waxay ku sameysey dayactir aad weyn sanadkii 1998-ki waxanaa xiligaasi ka hor uu qaadi karey 13500 (Sadex & Toban kun shan boqol) waxaana laga dhigay 32,000 (Sodon & laba kun) kursi in uu qaadi karo iyadoo waliba lagu darey qayb ah Arena ama masrax ah oo loogu tala galey in lagu qabto xafladaha.
Agaasimaha kooxda FC Twente Jan van Halst ayaa sheegay inay aad uga naxeen dhacdadan, waxaana uu sheegay inay tacsi u dirayaan qoysaskii dadkii ku dhintey & kuwii ku dhaawacmey shilkaasi.
Madaxweynaha kooxda Twente Joop Munsterman, ayaa sheegay inay hayaan dhaqaale ay ku dayactiraan garoonka, waxaana uu sheegay in ay si dhaqsi ah uga hawlgali doonaan dayactirka garoonka.
Taageerayaasha kooxda ayaa loogu baaqay inaanay garoonka imaan iyadoo taasi lagu macneeyey sababo xaga amaanka ah maadama qatar ka dhalan karta burburka garoonka. (Video Player hoose ka daawo garoonka dumay & khasaaraha ka dhacay)
FC Twenet waxay ku jirtaa haatan kooxaha u soo baxay isreeb reebka Champions League-ga waxaana ciyaarta ugu horeysay la filayey in ay gurigeeda ku ciyaarto 26-27 July ama 2-3 August.
naadigaan taageri jiray garoonkii miyaa ka dumay sorry